Miss Grand Myanmar 2020 အလှမယ်ဟန်လေးရဲ့ ခက်ခဲလွန်းတဲ့ ဘဝအကြောင်း – Cele Posts
Miss Grand Myanmar 2020 အလှမယ်ဟန်လေးရဲ့ ခက်ခဲလွန်းတဲ့ ဘဝအကြောင်း
အခုလိုအချိန်မှာ အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုင်းပြည် အခြေအနေကို international စင်မြင့်ထက်မှာ Speak Out လုပ်ပြီး အကူအညီတောင်းခံပေးတဲ့
ဒါမျိုးကို နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်ဟု ပရိတ်သတ်‌တော်တော်များများ ချီကျူးရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့် ဟန်လေးရဲ့အခက်ခဲတဲ့ ခရီးစဉ်လမ်းအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
သူမရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ သော်နန္ဒာအောင် တဲ့။မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့မှာ မွေးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်။ ဖခင်မရှိတဲ့ ဘဝမှာ အမေ့အရိပ်ကို ခိုလှုံရင်း ဆယ်တန်းကို ထူးထူး ချွန်ချွန်အောင်တယ်။ ဘတ်စ်ကတ်ဘောအားကစားသမားပီပီ စိတ်ဓာတ်မာတယ်။ အရည်အချင်းနဲ့ပဲ လူတွေကို လွှမ်းမိုးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ စိတ်ပညာ (ထူးချွန်) အထူးပြုနဲ့ တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာ နေရင်း ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။
ဒီကလေးမဟာ အလှအပကြောင့် ကျော်ကြားချင်တာ မဟုတ်။ ထက်မြက်မှုကြောင့် ကျော်ကြားချင်သူ။ ပေါ်ပင်အနုပညာ အလုပ်တွေ လုပ်ရင် နာမည်ကြီးနိုင်မှန်း သိပေမယ့် သူ ယုံကြည်ချက်သည် လူတကာ အတွက် နမူနာ စံပြအလှမယ် ဖြစ်ဖို့သမီးလုပ်ချင်တာကို ကူညီပေးမယ့် အမေတစ်ယောက်ကလွဲလို့ အဆက်အသွယ် ဘာမှ မရှိတဲ့ ကျောင်းသူလေးဟာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲငယ်လေးတွေကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ တိုးရရှာတယ်။ Miss လို Model လိုလိုနဲ့ ဘာမှန်းကို မသိဘူး ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေတော့ သူ ရိုးနေပါပြီ။ သို့သော် သူ့အိပ်မက်ကို သူ ယုံကြည်သူ။ တစ်ချိန်မှာ သူ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ရမယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် မြဝတီမြို့။ မော်လမြိုင်နဲ့ မြဝတီ အကူးအလူး ရှိတဲ့ သူမဟာ မယ်စကြဝဠာမြဝတီကို ဝင်ပြိုင်တယ်။ ဘေးစောင်းကြည့်တောင် ထင်ရှားတဲ့ အလှကြောင့် လူသိများခဲ့ပေမယ့် Final Night မှာ Q&A ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ဖြေချလိုက်ပါရောလာCity Miss တွေထဲမယ် ဟန်လေး – Miss Universe Myawaddy ဆိုတာ လူသိများစ ပြုလာတယ်။တောရုပ်နဲ့ တဲ့။ တောသူမတဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ နယ်က လာတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ဟာ တောရုပ်မထွက်လို့ ဘာရုပ်ထွက်ရမလဲ
ဒါပေမယ့် မိခင်ကြီးနဲ့အတူ တိုက်ခန်းလေး ငှားနေရင်း သူ ကြိုးစားတယ်။ ပိုက်ဆံလေးတွေ စုရင်း ရိုက်ရတဲ့ Photoshoot တွေမှာ တိုးတက်လာတာကြီးပဲ။အမေးအဖြေတွေ အင်တာဗျူးတွေတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ၁၀၁% ပဲ။ သွက်လက်ချက်ချာမှုဟာ အလှမယ် တစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်လို သူ တည်ဆောက်တယ်။ Winner ရဖို့ မှန်းကြသူတွေ မနည်း။၂၀၂၀ ဒီဇငျဘာ မယျစကွဝဠာပွိုငျပှဲည။ round တိုငျးကျို တောကျပတဲ့ ယုံကွညျမှုနဲ့ ယှဉျပွိုငျတဲ့သူမဟာ Final Q&A မှာ မွနျမာ့အလှမယျ လောကမှာ အကောငျးဆုံးအဖွတေဈခုကို ပေးလိုကျတယျ။ ကျွုးစားမှုနဲ့ ထိုကျတနျစှာပဲ 1st RU သရဖူကို ရပွီး Miss Grand Myanmar ဟနျလေး ဖွဈလာတယျ။
ကဲ Grand Slam ပွဲကြီးမှာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ် ဖြစ်လာတော့မယ်။ ပြင်ဆင်ချိန် ၁လကျော်မှာ သူ အကောင်းဆုံး လုပ်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ဘန်ကောက်ကို မသွားခင် ၂၆ ရက်အလို။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ရွံမုန်းစရာ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်လာတယ်။ ပုံမှန် ၁ နာရီခရီးကို လေယာဉ် ၂ဆင့် စီးရမှာနဲ့တင် ခက်ခဲနေရတဲ့ သူမဟာ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့လည်း မပျက်ကွက်ခဲ့ဖူး။ အလှမယ်ဆိုတာ ဘာလုပ်ရမလဲ သူသိတယ်လေ။ ဆန္ဒပြရင်းနဲ့ပဲ ပြင်ဆင်တယ်။ Training ယူတယ်။ ပုံတွေ ရိုက်ရတယ်။ လိုက်ပို့သူ ဆယ်ယောက်မပြည့်တဲ့ အနေအထားမှာ ဒီနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာတယ်ပရိသတ်တွေမှာလည်း ရသလောက် အားပေးရရှာပါတယ်။ အင်တာနက် ဖြတ်တဲ့ ကြားက Voting တွေ ပေးတယ်။
ဒါကို သိလို့လည်း သူ့မှာ ဆယ်ဆ ပိုကြိုးစားပေးရှာတယ်။ အမိမြေမှာ လူတွေ သေနေတဲ့ သတင်းကို ကြားနေရင်း ပြိုင်ပွဲအတွက် သူ အားတင်းရတယ်။ Activity တိုင်းမှာ တက်ကြွစွာ။ညညဆိုရင်တော့ အခန်းဖော် ဖိလစ်ပိုင်မယ်လေးနဲ့ စကားတွေ ပြောရင်း မျက်ရည်ကျရသတဲ့။ စိတ်ပူရတယ်လေ။ Stop the War and Violence ဆိုတဲ့ Motto ဟာ သူမနဲ့ မကိုက်ညီပဲ နေမလား။။ပွဲတစ်လျှောက် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဆိုးယုတ်မှုကို အမြဲ Speak Out လုပ်လာသူ သူမ။ ကျွန်မကို Support ပါ ဆိုတာထက် မြန်မာပြည်သူတွေကို Support ပါ လို့သာ မရဲတရဲ ဆိုရရှာသူ သူမ။ မွေးရပ်မြေကို မပြန်ရမှာ မကြောက်ဘူးလား လို့ မေးတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီမရမှာကိုပဲ ကြောက်တယ် လို့ ပြောခဲ့သူ။Final မတိုင်ခင် တစ်ပတ်လောက် အလို။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ mobile data တွေ ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ ပြည်တွင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ပျော်စရာ နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် သူ ယူပေးပါရစေ။
Prelim မှာ သူ ကြိုးစားတယ်။ Miss Grand Myanmar တွေထဲ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောနိုင်တဲ့ Performance တွေကို ချပြခဲ့တယ်။ Fan တွေစကားကို နားထောင်ဖို့လည်း မပျက်ကွက်ခဲ့။မတ်လ ၂၇ ရက်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူရဲကောင်း ၁၀၀ ကျော် ကျဆုံးရ။ သွေးမြေကျရ။ ခမ်းနားတဲ့ Final Night အတွက် သူများအလှမယ်တွေ အပြုံးတွေနဲ့ တက်ကြွနေချိန် မြန်မာမယ်လေးဟာ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းတွေကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အနိုင်နိုင်ထိန်းနေရတယ်။ပွဲစပြီ။ အလှအပတွေ အပြိုင်အဆိုင်များလို့ ပွဲကျပ်လွန်းတဲ့ MGI ရဲ့ Top 20။ Miss Grand Myanmar တဲ့။ ၆ နှစ်ကြာ Unplaced ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို သူ ချေဖျက်လိုက်ပါပြီ။ အခက်အခဲတွေ ကြားက ကြိုးစားပေးခဲ့ရသူ။ Fan တွေ ပျော်မဆုံးပေါ့။
Top 10 တော့ မပါပေမယ့် သူမ ကြိုးစားထားပါသတဲ့။ ကြေကွဲ နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို အားတင်း ပြိုင်ရရှာတယ်။ ပွဲအစီအစဉ်တွေ ပြီးခါနီး။ Surprise! မြန်မာနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်မှုတွေအကြောင်း မြန်မာမယ်လေး ပြောပါမယ်တဲ့။သန်းဆယ်နဲ့ ချီတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ကြည့်နေတဲ့ MGI Show ကြီးမှာ စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နေပုံ ပြည်သူတွေ ခံစားရပုံ Video တွေ ဝေဝေဆာဆာ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်များ။ နိုင်ငံတကာက ပိုသိကြရပြီ။ ဝတ်စုံအဖြူနဲ့ အလှမယိလေးဟာ မျက်ရည်တွေ ကျရင်း နိုင်ငံအကြောင်းကို သတ္တိရှိရှိ ထွက်ဆိုတယ်။
အားတင်းထားပါ မြန်မာ ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက အသံတွေ စကားတွေ ပလူပျံလို့။ သူမ အလှမယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ တာဝန်ကျေတာထက်ကို ပိုခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်မှာ သူမရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို Speak Out လုပ်ပေးခဲ့ပါပြီ။အလှမယ်လောကကို အထင်မှားခဲ့ကြသူတွေဟာ အလှမယ်တစ်ယောက်ရဲ့ တနိဖိုးကို မြင်လာကြပါပြီ။ပြန်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိ။ သုံးစရာ စရိတ်မရှိတော့တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အပြန်လမ်းဟာ မသေချာ မရေရာ။ သို့သော် ဟန်လေး လုံးဝ နောင်တမရ။ နယ်က လာတဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးဟာ နိုင်ငံ့အရေးကို ကမ္ဘာက သိအောင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောပြနိုင်ခဲ့ပြီ။ နိုင်ငံ့အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။ ဟန်လေးရဲ့ အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါပြီ။Miss Grand Myanmar 2020 ဟန်လေးအား လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
Miss Grand Myanmar 2020 အလှမယျဟနျလေးရဲ့ ခကျခဲလှနျးတဲ့ ဘဝအကွောငျး
အခုလိုအခြိနျမှာ အခုလကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ တိုငျးပွညျ အခွအေနကေို international စငျမွငျ့ထကျမှာ Speak Out လုပျပွီး အကူအညီတောငျးခံပေးတဲ့
ဒါမြိုးကို နိုငျငံကိုယျစားပွုအလှမယျဟု ပရိတျသတျ‌တျောတျောမြားမြား ခြီကြူးရှိနကွေတယျ။ဒါကွောငျ့ ဟနျလေးရဲ့အခကျခဲတဲ့ ခရီးစဉျလမျးအကွောငျးတှကေိုဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
သူမရဲ့နာမညျအရငျးကတော့ သျောနန်ဒာအောငျ တဲ့။မှနျပွညျနယျ မျောလမွိုငျမွို့မှာ မှေးတဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျ။ ဖခငျမရှိတဲ့ ဘဝမှာ အမအေ့ရိပျကို ခိုလှုံရငျး ဆယျတနျးကို ထူးထူး ခြှနျခြှနျအောငျတယျ။ ဘတျဈကတျဘောအားကစားသမားပီပီ စိတျဓာတျမာတယျ။ အရညျအခငျြးနဲ့ပဲ လူတှကေို လှမျးမိုးခငျြပါတယျဆိုတဲ့ မိနျးကလေးဟာ သမိုငျးဝငျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျကွီးမှာ စိတျပညာ (ထူးခြှနျ) အထူးပွုနဲ့ တက်ကသိုလျအဆောငျမှာ နရေငျး ကြောငျးတကျခဲ့တယျ။
ဒီကလေးမဟာ အလှအပကွောငျ့ ကြျောကွားခငျြတာ မဟုတျ။ ထကျမွကျမှုကွောငျ့ ကြျောကွားခငျြသူ။ ပျေါပငျအနုပညာ အလုပျတှေ လုပျရငျ နာမညျကွီးနိုငျမှနျး သိပမေယျ့ သူ ယုံကွညျခကျြသညျ လူတကာ အတှကျ နမူနာ စံပွအလှမယျ ဖွဈဖို့သမီးလုပျခငျြတာကို ကူညီပေးမယျ့ အမတေဈယောကျကလှဲလို့ အဆကျအသှယျ ဘာမှ မရှိတဲ့ ကြောငျးသူလေးဟာ အလှမယျပွိုငျပှဲငယျလေးတှကေနေ ခကျခကျခဲခဲ တိုးရရှာတယျ။ Miss လို Model လိုလိုနဲ့ ဘာမှနျးကို မသိဘူး ဆိုတဲ့ ဝဖေနျသံတှတေော့ သူ ရိုးနပေါပွီ။ သို့သျော သူ့အိပျမကျကို သူ ယုံကွညျသူ။ တဈခြိနျမှာ သူ နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျနိုငျရမယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ မွဝတီမွို့။ မျောလမွိုငျနဲ့ မွဝတီ အကူးအလူး ရှိတဲ့ သူမဟာ မယျစကွဝဠာမွဝတီကို ဝငျပွိုငျတယျ။ ဘေးစောငျးကွညျ့တောငျ ထငျရှားတဲ့ အလှကွောငျ့ လူသိမြားခဲ့ပမေယျ့ Final Night မှာ Q&A ကို အင်ျဂလိပျဘာသာစကားနဲ့ ဖွခေလြိုကျပါရောလာCity Miss တှထေဲမယျ ဟနျလေး – Miss Universe Myawaddy ဆိုတာ လူသိမြားစ ပွုလာတယျ။တောရုပျနဲ့ တဲ့။ တောသူမတဲ့။ ဟုတျတယျလေ။ နယျက လာတဲ့ ကြောငျးသူလေးတဈယောကျဟာ တောရုပျမထှကျလို့ ဘာရုပျထှကျရမလဲ
ဒါပမေယျ့ မိခငျကွီးနဲ့အတူ တိုကျခနျးလေး ငှားနရေငျး သူ ကွိုးစားတယျ။ ပိုကျဆံလေးတှေ စုရငျး ရိုကျရတဲ့ Photoshoot တှမှော တိုးတကျလာတာကွီးပဲ။အမေးအဖွတှေေ အငျတာဗြူးတှတေိုငျးမှာ သူ့ရဲ့ ယုံကွညျမှုက ၁၀၁% ပဲ။ သှကျလကျခကျြခြာမှုဟာ အလှမယျ တဈယောကျရဲ့ ဂုဏျဒွပျလို သူ တညျဆောကျတယျ။ Winner ရဖို့ မှနျးကွသူတှေ မနညျး။၂၀၂၀ ဒီဇငဘြာ မယစြကှဝဠာပှိုငပြှဲည။ round တိုငြးကြို တောကပြတဲ့ ယုံကှညမြှုနဲ့ ယှဉပြှိုငတြဲ့သူမဟာ Final Q&A မှာ မှနမြာ့အလှမယြ လောကမှာ အကောငြးဆုံးအဖှတစေခြုကို ပေးလိုကတြယြ။ ကြှုးစားမှုနဲ့ ထိုကတြနစြှာပဲ 1st RU သရဖူကို ရပှီး Miss Grand Myanmar ဟနလြေး ဖှစလြာတယြ။
ကဲ Grand Slam ပှဲကွီးမှာ နိုငျငံကိုယျစားပွု အလှမယျ ဖွဈလာတော့မယျ။ ပွငျဆငျခြိနျ ၁လကြျောမှာ သူ အကောငျးဆုံး လုပျဖို့ပဲ ရှိတယျ။ဘနျကောကျကို မသှားခငျ ၂၆ ရကျအလို။ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျနမှေ့ာ ရှံမုနျးစရာ အာဏာသိမျးမှု ဖွဈလာတယျ။ ပုံမှနျ ၁ နာရီခရီးကို လယောဉျ ၂ဆငျ့ စီးရမှာနဲ့တငျ ခကျခဲနရေတဲ့ သူမဟာ အာဏာရှငျကို ဆနျ့ကငျြဖို့လညျး မပကျြကှကျခဲ့ဖူး။ အလှမယျဆိုတာ ဘာလုပျရမလဲ သူသိတယျလေ။ ဆန်ဒပွရငျးနဲ့ပဲ ပွငျဆငျတယျ။ Training ယူတယျ။ ပုံတှေ ရိုကျရတယျ။ လိုကျပို့သူ ဆယျယောကျမပွညျ့တဲ့ အနအေထားမှာ ဒီနိုငျငံကနေ ထှကျခှာတယျပရိသတျတှမှောလညျး ရသလောကျ အားပေးရရှာပါတယျ။ အငျတာနကျ ဖွတျတဲ့ ကွားက Voting တှေ ပေးတယျ။
ဒါကို သိလို့လညျး သူ့မှာ ဆယျဆ ပိုကွိုးစားပေးရှာတယျ။ အမိမွမှော လူတှေ သနေတေဲ့ သတငျးကို ကွားနရေငျး ပွိုငျပှဲအတှကျ သူ အားတငျးရတယျ။ Activity တိုငျးမှာ တကျကွှစှာ။ညညဆိုရငျတော့ အခနျးဖျော ဖိလဈပိုငျမယျလေးနဲ့ စကားတှေ ပွောရငျး မကျြရညျကရြသတဲ့။ စိတျပူရတယျလေ။ Stop the War and Violence ဆိုတဲ့ Motto ဟာ သူမနဲ့ မကိုကျညီပဲ နမေလား။။ပှဲတဈလြှောကျ စဈအာဏာရှငျတှရေဲ့ ဆိုးယုတျမှုကို အမွဲ Speak Out လုပျလာသူ သူမ။ ကြှနျမကို Support ပါ ဆိုတာထကျ မွနျမာပွညျသူတှကေို Support ပါ လို့သာ မရဲတရဲ ဆိုရရှာသူ သူမ။ မှေးရပျမွကေို မပွနျရမှာ မကွောကျဘူးလား လို့ မေးတဲ့အခါ ဒီမိုကရစေီမရမှာကိုပဲ ကွောကျတယျ လို့ ပွောခဲ့သူ။Final မတိုငျခငျ တဈပတျလောကျ အလို။ စဈအာဏာရှငျတှဟော mobile data တှေ ဖွတျခလြိုကျတယျ။ ပွညျတှငျးနဲ့ အဆကျအသှယျ ပွတျခဲ့ပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဝမျးနညျးနရေတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ ပြျောစရာ နညျးနညျးလေးဖွဈဖွဈ သူ ယူပေးပါရစေ။
Prelim မှာ သူ ကွိုးစားတယျ။ Miss Grand Myanmar တှထေဲ အကောငျးဆုံးလို့ ပွောနိုငျတဲ့ Performance တှကေို ခပြွခဲ့တယျ။ Fan တှစေကားကို နားထောငျဖို့လညျး မပကျြကှကျခဲ့။မတျလ ၂၇ ရကျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ သူရဲကောငျး ၁၀၀ ကြျော ကဆြုံးရ။ သှေးမွကေရြ။ ခမျးနားတဲ့ Final Night အတှကျ သူမြားအလှမယျတှေ အပွုံးတှနေဲ့ တကျကွှနခြေိနျ မွနျမာမယျလေးဟာ ဝမျးနညျးစရာ သတငျးတှကွေောငျ့ ကတြဲ့ မကျြရညျတှကေို အနိုငျနိုငျထိနျးနရေတယျ။ပှဲစပွီ။ အလှအပတှေ အပွိုငျအဆိုငျမြားလို့ ပှဲကပျြလှနျးတဲ့ MGI ရဲ့ Top 20။ Miss Grand Myanmar တဲ့။ ၆ နှဈကွာ Unplaced ဖွဈခဲ့တဲ့ သမိုငျးကို သူ ခဖြေကျြလိုကျပါပွီ။ အခကျအခဲတှေ ကွားက ကွိုးစားပေးခဲ့ရသူ။ Fan တှေ ပြျောမဆုံးပေါ့။
Top 10 တော့ မပါပမေယျ့ သူမ ကွိုးစားထားပါသတဲ့။ ကွကှေဲ နတေဲ့ မကျြနှာလေးကို အားတငျး ပွိုငျရရှာတယျ။ ပှဲအစီအစဉျတှေ ပွီးခါနီး။ Surprise! မွနျမာနိုငျငံက အကွမျးဖကျမှုတှအေကွောငျး မွနျမာမယျလေး ပွောပါမယျတဲ့။သနျးဆယျနဲ့ ခြီတဲ့ ကမ်ဘာတဈလှားက ကွညျ့နတေဲ့ MGI Show ကွီးမှာ စဈတပျက အကွမျးဖကျနပေုံ ပွညျသူတှေ ခံစားရပုံ Video တှေ ဝဝေဆောဆာ ကွကှေဲစရာ ဖွဈရပျမြား။ နိုငျငံတကာက ပိုသိကွရပွီ။ ဝတျစုံအဖွူနဲ့ အလှမယိလေးဟာ မကျြရညျတှေ ကရြငျး နိုငျငံအကွောငျးကို သတ်တိရှိရှိ ထှကျဆိုတယျ။
အားတငျးထားပါ မွနျမာ ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာတဈလှားက အသံတှေ စကားတှေ ပလူပြံလို့။ သူမ အလှမယျတဈဦးအနနေဲ့ တာဝနျကတြောထကျကို ပိုခဲ့ပါပွီ။ နိုငျငံတကာစငျမွငျ့ထကျမှာ သူမရဲ့ ယုံကွညျခကျြနဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အသံကို Speak Out လုပျပေးခဲ့ပါပွီ။အလှမယျလောကကို အထငျမှားခဲ့ကွသူတှဟော အလှမယျတဈယောကျရဲ့ တနိဖိုးကို မွငျလာကွပါပွီ။ပွနျဖို့ အခကျအခဲတှေ ရှိ။ သုံးစရာ စရိတျမရှိတော့တဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ အပွနျလမျးဟာ မသခြော မရရော။ သို့သျော ဟနျလေး လုံးဝ နောငျတမရ။ နယျက လာတဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ရတဲ့ မိနျးကလေးဟာ နိုငျငံ့အရေးကို ကမ်ဘာက သိအောငျ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပွောပွနိုငျခဲ့ပွီ။ နိုငျငံ့အတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈစခေဲ့ပွီ။ ဟနျလေးရဲ့ အိပျမကျတှေ တကယျဖွဈလာပါပွီ။Miss Grand Myanmar 2020 ဟနျလေးအား လေးစားစှာ ဂုဏျပွုအပျပါသညျ။
တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးအတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မော်လမြိုင်က (၁၁)နှစ် သမီးလေး အေးမြတ်သူအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း
အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တိုင်းရင်းသားများအတွက် တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းကာ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ့် နော်ဖောအယ်ထား